Hevitra mandalo, resaky ny mpitsimpona akotry: malalaka ny fahafahana hiteny | NewsMada
Hevitra mandalo, resaky ny mpitsimpona akotry: malalaka ny fahafahana hiteny
Sendran’ny tsy fidiny ny fitondrana, manaotran’izany aza ny fitondrana indray ity no voatery itahy ny zon’ny tsirairay sy ny rehetra mikasika ny fahafana hanambara hevitra. Ny tsy itovizana moa dia eo ihany nohon’ny fahefana ara-bola izay ilaina raha tiana anana ako ny hevitra tiana ampitaina ho an’ny rehetra. Resaka hafa moa ny momban’ izay, na inona na inona fitsipika voalaza mikasika ny fitovin-jo eo ihany ny fetran’ny fananana hery vola izay samy manana ny anjarany samy hafa amin’ny sasany. Na afaka lazaina aza noho izay fa miangatra ny vintana, akory atao, raisina toy izay izy hany ezaka apetraka ho adidin’ny fandaminana eo amin’ny fiaramonina izany hoe amin’ny fanjakana dia ny fikarohana lamina hitovizan’ny rehetra saranga sy ahafahan’ny tsirairay hampisondrotra vintana amin’ ny alàlan’ny fampitombona fahaizana sy fahalalana tovoizina amin’ny fikezahana eo ampanarahana fampianarana any an-tsekoly. Mbola resaka hafa koa izay, ary ho hita eo ny fikasan’ireo mpilatsaka tsirairay mikasika ny fandrarina ny tontolon’ny fampianarana izay fototry ny fanarenana ny tsy fitoviana ateraky ny fiangaran’ny vintana.
Ny tena resaka anio dia ity fahafahana amin’ny fanambarana hevitra. Hatrany hatrany azon’ny fakampanahy ny mpitondra amin’ny fametrahana fefy sy sakantsakana hifehy an’io fahafahana io. Noho izany adidin’ny vahoaka no mampiseho fahasarotam-piaro mikasika an’izany fahafahana izany. Nitady toko moa ka sendra vato tamin’ity indray mitoraka ity, izany hoe nohon’ny tranga nisy dia ny fitondrana eo an-toerana, ny governemanta vaovao izany no nahazo iraka sy adidy mikasika ny fitsinjovana an’izany fahafahana izany. Tano ny azo fa sarotra ny mila.
Na eo aza izany tsy midika baranahana anefa ny fahafahana. Tsy hiverina sanatria amin’ireo sakantsakana izay fandravana ny fahafahana no tena fotony, nefa misy ihany ny lamina ilaina mba tsy anjakazakan’ny matanjaka amin’ ny fibahanan-toerana irery ny sehatry ny fahalalahana. Misy ireo andian’olona mitaky ny fandrarana ny fampielezan-kevitra alohan’ny fotoana voafetra, marina izany raha ampiharina amin’ny rehetra izany fandrarana izany. Fantatra fa amin’izao ankatoky ny fifidianana izao ny hetsika rehetra ataon’ny filohampirenena dia naman’ny fampielezan-kevitra daholo tsy misy kabary tsy mifono fandresen-dahatra amin’ny fideraderana tena. Aiza dia izy irery ve no haka tombon-dàlana no sady mbola vola-panjakana indray no hiantoka an’izany. Aleho hipetraka ny didy izay tsy ampitongilana bebe kokoa ny mizana efa mitory ny tsy fitovin’ny vintana.